2-da maamul ee Daarood, yaa ugu dhaw ee dowlada dhexe hoos keeni kara? - Caasimada Online
Home Warar 2-da maamul ee Daarood, yaa ugu dhaw ee dowlada dhexe hoos keeni...
2-da maamul ee Daarood, yaa ugu dhaw ee dowlada dhexe hoos keeni kara?
Soomaaliya burburkii kaddib waxaa loo dhisay dhawr dowladeed oo hana qaadi waayey oo laga xusi karo tii Cali Mahdi oo KMG ahayd iyo waliba Cabdiqaasim Salaad Xassan oo 2000 kun lagu soo dhisay Jabuuti.
Ogow, kuwii ka horreeyey laga soo bilaabo Lixdankii ilaa iyo Kacaanka dalka waxa uu ahaa dowlad dhexe (Centralized Unitary) balse 2004 shirkii Kenya ayaa lagu go’aamiyey in loo guuro nidaamka Federal-ka ah ee aan magic ahaan ahysanno balse aynaan ku dhaqmin.
Hase ahaatee, nidaamkii Federal-ka ahaa dowladdii u dambeeyey wey dhaqaajin waayeen oo waxa ay noqdeen caqabad ku hor gudban dowladnimada iyo madax bannaanida dalka, qormadan kuma foogana sax ahaanshaha nidaamka Federal-ka in dalku qaato iyo in kale balse waxaan ku eegi doonaa sida ugu fudud ee loogu dhaqmi karo.
Caadiyan dalkan waxaa fursad u helay in uu hoggaamiyo isaga oo ay ka jiraan nidaam Federal ah dhawr madaxweyne oo uu ugu dambeeyo Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Sax, qaar Puntland oo qura ayey la kulmeen sida Cabdullahi Yusuf iyo Sheekh Shariif halka Xassan Sheekh Maxamuud oo inta badan dhisan iyo Farmaajo ay la kulmeen shan maamul gobolleed.
Faaladan kooban waxaan ku eegi doonaa dhibtii ay hoggaamiyeyaashii hore maamulada kala kulmeen, halka sararta ka qurun saneyd iyo waxa ay soo kordhin karaan mamaulka hadda jooga.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf (AUN)
Walow uusan fursad u helin in uu hoggaamiyo Maamullo badan hadana waxa uu ku soo aaday Puntland oo uu isagu dhisay. Xilligaas Puntland hiil iyo hooba wey ku garab istaagtay maamulkiisii.
Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Waxba kama duwaneyn Madaxweynihii ka horreeyey Cabdullaahi Yusuf, hase ahaatee, waxa uu kaga duwanaa Puntland uma kool koolin sidii odaygii ka horreeyey oo laf dhuun gashay ayey ku noqdeen.
Waxa ay ku qasbi jireen in uu soo magacaabo Raisul Wasaaraha ay rabaan, saameeyaan golaha Wasiirada ilaa laga sameeyey wax loo yaqaan Road-Map oo uu toos talada wax ugu lahaa Faroole oo hoggaaminayey Puntland.
Puntland iyo isla Faroole fursad ma aysan siin oo durba waxa ay ku qaadeen dagaal iyaga oo ku lug yeeshay dhismihii Jubbaland oo si aan sharci ahayn iyo qori caaraddii uu ku sameystay Axmed Madoobe.
Taageero aan kala har lahayd ayuu Faroole oo afuufaya wax loo bixiyey “Darodism” ku bixiyey Jubbaland. Waxaa bedelay Gaas oo loo han weynaa maadama uu Raisul Wasaare ka soo noqday Soomaaliya balse isagaba ayaaba ka daran Faroole.
Kaba daran, Puntland waxa ay heshay garab oo maamulkii ay dhiseen ayaa ku taageeray dibin daabyada dowladnimada Soomaliya.
Hadaba, su’aasha is weydiinta mudan ayaa ah, yaa ugu habboon ee labada maamul ee Daarood ogoleysiin kara sida dastuurku qabo in ay hoos yimaadaan oo la shaqeeyaan dowladda dhexe?
Dalka hadda waxaa ka dhisan dowlad uu hoggaamiyo Madaxweyne Daarood ah. Sida muuqata waxa ay dagaal kula jiraan mamaulada oo ay doonayaan in ay hoos keenaan ama wada shaqeyn buuxda dowladda dhexe la yeeshaan oo aysan sida dowlado madax bannaan u dhaqmin.
Hirshabeelle wey ku guuleysteen, Koonfur Galbeed sidoo kale ayey hantiyeen, Galmudug sidaas ayey ku dhawdahay, kaliya waxaa harsan labadii awalba dhibta badnaa.
Ma jiri doono Madaxweyne aan Farmaajo ahayn oo yeelan doonaa fursadaha hadda la haysto, sababto waa in; 1 – Uu Daarood yahay oo meesha ay ka bixi doonto durbaankii qabiilka ee ay labadaas maamul tumi jireen, 2 – In Farmaajo haysto kalsoonida shacabka.
Waxaa lama huraan ah in dowladda dhexe lagu garab istaago in ay ugu yaraan dowladda hoos keenaan labadaas maamul.